RW Rooble - “Shacabka ayaan u shaqeynnaa” (Farriin) | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble - “Shacabka ayaan u shaqeynnaa” (Farriin)
Maxamed X. Rooble, Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, ayaa jeediyay hadal laga dheehan karo, in uusan gorgortan ka gali dooniin kiiska cadaaladda u baahan ee Ikraan Tahliil Faarax.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaliya Mxamed Xuseen Rooble, oo dhawaan hadal kooban ka jeediyay kulan is-cafis ah oo si buuxda loogu soo af-meeray khilaafkii mudada sanadka ah ka dhex aloosnaa siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada Waqooyi ee Soomaliya, ayaa sheegay in aan cidna loo joojin doonin u khidmeynta shacabka.
Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, Wuxuu si weyn ugu celceliyay in siyaasiyiinta xilalka heysa ay u adeegaan shacabka, isla-markaaana aysan jirin cid ku tagri-fali karta awoodda shacabka.
“Xaaladda dalku ku jiro waa sahlanaaneysaa, wax kasta oo adagna fudeyd ayay ku dhamaadaan, niyadiinna kheyr u sheega, cid cid u istaageysa malaha, waxaan rabaa in aan shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo masuuliyadda idinka ayaa noo dhiibtay, shacabka ayaan u khidmeynaa, cid shacabka ka sarreysa ma jirto, shacabkaa waa xor”, ayuu yiri RW Rooble.
Hadalkaan, ayaa ku soo aadaya xilli, uu RW Rooble, maata ku adkeystay in uusan gorgortan ka gali doonin go’aankiisa shaqo ka joojinta Agaasimihii NISA Fahad Yaasiin, magacaabiddii Agaasimaha KMG Bashiir Goobe, iyo kiiska baaritaanka Maxkamadda, kadib markii uu kulan ay goob jog ka ahaayeen qaar ka mid ah taliyayaasha ciidanka iyo Guddoonka Baarlamaankii 10-aad ee waqtigiisu dhamaaday oo uu la yeeshay Farmaajo.